Maxkamada Ciidamada Somaliland oo 8 ruux ku xukuntay dil toogasho – STAR FM SOMALIA
Maxkamada Ciidamada Somaliland ayaa maanta dil toogasho ku xukuntay 8-ruux, kadib markii Maxkamadu ku heshay inay si wada jir ah Taliye ciidan ugu dileen bishii Maarso ee sanadkan magaalada Berbera.
Guddoomiyaha Maxkamada Ciidamada Somaliland Col. Yusuuf Faarax Sharma’arke, ayaa ku dhawaaqay xukunkan, sagoo xusay in dhamaan 8-da ruux ay dileen Taliyihii hore ee qeybta Booliska magaalada Bereba G/lle C/risaaq Maxamuud Yuusuf.
Sidoo kale Maxkamadda ayaa todobo sano oo xabsi ah ku xukuntay 8 kale oo iyana lagu eedeeyay inay weerar ku qaadeen deegaan lagu magacaabo Ceel Garde.
Qareenka u doodayay eedeysanayaasha oo lagu magacaabo maxamed Jaamac Cabdi ayaa ku tilmaamay xukunkan mid cadaalad ka fog oo siyaasadeyn.
Waxaa uu sheegay inay ka qaadan doonaan xukunkan racfaan, maadaama uu tilmaamay in ragga la xukumay ay ahaayeen rayid, isla markaana aanay sharci aheyn in Maxkamad ciidan la hor-geeyo.
Dhamaan Ragga la xukumay ayaa ka soo jeeda hal deegaan, waxaana marka ay xukunka rideysay Maxkamadda ka maqnaa shan ka mid ah 8 ruux ee lagu xukumay dilka.
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 24-07-2016